ဒုသမ္မတရဲ့ ဆေးစစ်ချက် အဖြေ Negative ထွက် - Myitter
April 15, 2020 Myitter Uncategorized 0
ဒုတိယ သမ္မတကြီး ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ နဲ့ မိသားစု အပါအဝင် လူ ၃၂ ဦး ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ရာ အားလုံး ပိုးမတွေ့ အဖြေထွက်ကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက နေပြည်တော် အခြေစိုက် သမ္မတအိမ်တော် သတင်းထောက် အဖွဲ့ကို အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာတချို့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးအခမ်းအနားက တရားဟော ဆရာတစ်ဦးနဲ့ ဒုသမ္မတ တို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့ ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း လုထုရဲ့ စိုးရိမ်မှု မြင့်တက်နေတာကို ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ဒုသမ္မတနဲ့မိသားစု အပါအဝင် သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့ မှု ရှိခဲ့သူ ၃၂ ဦးကို ဆေးစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဆေးစစ်ချက် အဖြေကို ဧပြီ ၁၅ ရက် ဒီနေ့ မနက် အစော ပိုင်း (မနေ့ည နှောင်းပိုင်း) မှာ သိရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့ အပေါ် သတင်း ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ စစ်ဆေးချက် အဖြေတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ပုံမှန် အတိုင်း ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အဝင်-အထွက်ကို စိစစ်သတ်မှတ်ထားသူများမှအပ အထိအတွေ့ မရှိစေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး Guideline များနဲ့အညီ စိစစ်ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းတို့ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း လည်း ဦးဇော်ဌေး က ပြောပါတယ်။
ကိုဗဈ-၁၉ ကို မကွောကျဖို့ ဟောပွောခဲ့သူ ခရဈယာနျဂိုဏျးအုပျဆရာတဈဦး၊ ကိုဗဈကွောငျ့ ကှယျလှနျ
COVID-19 ပိုးတွေ့သူ ၁၂ ဦး ထပ်တိုး ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၇၄ ဦးရှိပြီ
နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးနောက်မှ ပထမဆုံး ပြန်တွေ့ရှိတဲ့ ပြည်တွင်းကူးစက်မှု လူနာအမှတ် (၂၃၁) . . .
အရငျဘဝကပွုခဲ့တဲ့ ကောငျးမှုတှကွေောငျ့ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ပေါကျတာပါလို့ ပွောလာတဲ့ သမီးငယျလေး … (ရုပျသံ)
သံဃာတော်တွေကို ပုတ်ခတ်ရေးသားတဲ့ ဆရာဝန်ကို ထောင်တစ်နှစ် နဲ့ကိုးလ အမိန့်ချ . . .
COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ သတငျး ထုတျပွနျခွငျး . . .
မုဒိတာ အိမ်ရာက အမျိုးသမီးတွေကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကိစ္စ တာဝန်ရှိသူများ နှာစေးနေ . . .